Chizvarwa cheZimbabwe Chakatemwa neDemo kuSouth Africa Chowana Rumwe Rubatsiro rweKudzokera kuMusha
Kubvumbi 13, 2022
Immanuel Zinja Zimbabwean In SA Attack 3
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe VaEmmanuel Zinja avo vakatemwa nematemo nemakano kunzvimbo yeBredasdorp kuWestern Cape nezvizvarwa zvemu South Africa zvichivapomera mhosva yekutora mabasa avo.
VaZinja vaudza Studio 7 kuti vari kufara nekutenda Mwari nevateereri venhepfenyuro yeStudio7 sezvo veruzhinji vari kuvafonera nekuvatumira rubatsiro rwemari rwekuti ivo nemudzimai wavo vadzokere kumusha.
Vati kubva zvavakataura nyaya yavo panhepfenyuro ino vakabva vatanga kuwana rubatsiro rwavainge vakumbira.
Zvichakadaro, masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International neFoundation for Human rights anoti zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kuSouth Africa zvave kugara zvakabatira ura mumaoko nekutyira kurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zvichitevera kupondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe VaElvis Nyathi munyika iyi.
United Nations yakashorawo kupondwa kwaVaNyathi avo vave kutarisirwa kutakurwa mangwana kuenda kunoradzikwa kumusha mushure memunamato muJohanneburg. Hama dzvo dzinoti ndivo vainge vakatobata mhuri vachishanda vari kuSouth Africa.
Hurukuro naVaEmmanuel Zinja